Palestina: Niteraka fanehoan-kevitra teo amin’ireo bilaogera ny daroka an’habakabaka Israeliana (2008) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2019 14:44 GMT
Taorian'ny fiafaràn'ny fampitsaharana ady teo amin'i Israely sy ny Hamas, dia nitombo ny herisetra sy ny fifandonana teo amin'i Israely sy i Gaza. Namely an'i Gaza tamin'ny daroka an'habakabaka ny israeliana tamin'ilay antsoin'ny AFP hoe “iray amin'ireo andro mihoso-drà indrindra nandritra ny ady naharitra taom-polo mahery tao Afovoany Atsinanana.” Hatramin'izao, eo amin'ny 210 ary mihamitombo ny isan'ny maty ao Gaza.
Tezitra tamin'ny zavatra hitany fa hetsika tsy misy ilavana azy avy amin'i Isiraely ny tontolon'ny bilaogy Palestiniana, izay ahitana ireo Palestiniana sy ireo mpanohana manerana izao tontolo izao. No Justice No Peace…The Big Picture, mpikambana iray manan-kaja ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Palestiniana, niteny hoe:
PalestineFreeVoice manipika fa nampiasa fitaovam-piadiana iraisam-pirenena voaràra i Israely tamin'ny fanafihana ary nitatitra fa:
Mpanoratra ao amin'ny Global Voices Bahrain, bint battuta, namoaka hafatra an-tsoratra avy amin'ny namana iray ao Rafah:
Efa manome antoka sahady ireo bilaogera Palestiniana fa hitarika ny tontolon'ny bilaogy hihetsika ity daroka an'habakabaka farany indrindra ity. Ali Abunimah, manoratra ao amin'ny The Electronic Intifada, nanamarika fa misy ny fihetsiketsehana karakaraina manerana izao tontolo izao:
Hanohy hanolotra fandrakofana avy amin'ny bilaogera samihafa ny Global Voices. Jereo matetika ny pejy fandrakofana manokana momba ny daroka baomba ao Gaza na misorata anarana ao amin'ny fahana RSS Palestina.